အောင်မြင်သောလူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာအတွက်မည်သည့်အချက်များကလုပ်သနည်း။ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ 28, 2015 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာစီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာများမှခေါင်းဆောင်များနှင့်ကျွန်တော်ထိုင်နေသည်။ အောင်မြင်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ဘာတွေလိုအပ်သလဲဆိုတာပြောနေသည်။ အများသဘောတူညီမှုသည်ရိုးရိုးလေးပါ။ သို့သော်မည်မျှကုမ္ပဏီများရုန်းကန်နေသည်ကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ ဘယ်ကစရမလဲ.
ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးအဆိုပြုချက်ကိုနားမလည်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပုံပြင်တွေကိုမျှဝေခဲ့ပေမယ့်သူတို့က site အသစ်တွေအတွက် ၀ ယ်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုမရှိသောကုမ္ပဏီများ၏ပုံပြင်များကိုမျှဝေခဲ့ကြပြီးသူတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုမကျေနပ်ခဲ့ကြပါ။ ပြီးတော့ဒီပြtheနာတွေဟာလူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာမှာထပ်တူကျနေပြီးပဲ့တင်ထပ်နေတယ် - သင်၏ကွာဟချက်များသိသိသာသာကြီးထွားလာပြီးလူတိုင်းကြားရသည့်နေရာ။
အခြားစျေးကွက်များကတူညီစွာစဉ်းစားနေကြသောကောင်းမြတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်ဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုပါ လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာ၏အောင်မြင်သောအချက် ၇ ချက် အတွေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော Brian Solis နှင့် Charlene Li တို့၏အကြံဥာဏ်ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်သင်သည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်တိုးတက်ခြင်း၏ကြီးကျယ်သောအခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်မဟာဗျူဟာကိုတီထွင်ရမည်ကိုအလွန်သိသာထင်ရှားသင့်သည်။
သတ်မှတ်ပါ ဗျူဟာ လမ်းပြမြေပုံ။
ထူထောင်သည် အုပ်ချုပ်မှုစနစ် နှင့်လမ်းညွှန်ချက်များ။
လုံခြုံသော ၀ န်ထမ်းများ၊ အရင်းမြစ်များနှင့်ရန်ပုံငွေ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ နည်းပညာကို တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲကြောင်းပလက်ဖောင်း။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများသည်ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းကြောင်းဖြင့်မကြာခဏစတင်ခြင်း၊ အဖြေတစ်ခုကိုဝယ်ယူခြင်း၊ ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများကိုရှာဖွေခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်၊ မဟာဗျူဟာနှင့်ဘတ်ဂျက်အတွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ။ Argh!
ဒါ့အပြင်စျေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးသောအရာအချို့ကိုကြေငြာသည့်တံခါးမှကျွန်ုပ်တို့ထွက်မလာခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။ လူမှုမီဒီယာ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ အခက်အခဲများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုဆန်းစစ်။ စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်အမြင်များနှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်။ ဤအချက်များအားကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပြီးနောက်အလားတူကုမ္ပဏီများအတွက်မတူညီသောကိရိယာများကိုအကြံပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဆန်းမဟုတ်ပါ။
Brian နှင့် Charlene တို့၏စာအုပ်ကို download လုပ်ပါ။ လူမှုစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာ၏အောင်မြင်သောအချက်ခုနစ်ချက် အောင်မြင်သောဆိုရှယ်မီဒီယာဗျူဟာကိုဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုအသေအချာကြည့်ပါ။
Tags: ဘရိုင်ယန် solischarlene လီရေရှည်အမြင်လူမှုမီဒီယာလူမှုမီဒီယာရန်ပုံငွေလူမှုမီဒီယာရည်မှန်းချက်များလူမှုမီဒီယာအရင်းအမြစ်များလူမှုမီဒီယာလမ်းပြမြေပုံလူမှုမီဒီယာဝန်ထမ်းများဆိုရှယ်မီဒီယာနည်းဗျူဟာလူမှုမီဒီယာအောင်မြင်မှုဆိုရှယ်မီဒီယာနည်းပညာမဟာဗျူဟာလမ်းပြမြေပုံ
Facebook ထက်ပိုကောင်းတဲ့ Event Tool ရှိသလား။